एक्लो परिवारको खाना खर्च डेढ लाख- रोचक - कान्तिपुर समाचार
एक्लो परिवारको खाना खर्च डेढ लाख
वैशाख २६, २०७४ दिनेश यादव
काठमाडौं — ७२ वर्षीय डेज जिओनाको परिवारका सदस्य एउटा, दुइटा, तीन वटा हैन, १ सय ८१ जनाको छ । जिओनाले ३९ श्रीमती, ९४ सन्तान, १४ बुहारी र ३३ नातिनातिनासहित जम्बो परिवारलाई पाल्छन् ।
सिंगो परिवारका १८१ सदस्यका लागि दैनिक ३० किलो मासु, ६० किलो आलु र ५० किलो चामलको भात पाक्ने गर्छ ।
जिओना आफ्ना ३९ श्रीमती, ९४ सन्तान, १४ बुहारी र ३३ नातिनातिनासँगै चारतले घरमा मिलिजुली र हाँसीखुसी बस्छन् ।
आफूलाई चाहिने खाद्य सामग्री आफ्नै खेतबारीमा उब्जाउँछन्, मिलेर सबैले बराबर काम गर्छन् ।
महँगीको यो जमाना । बजारमा वस्तुको मूल्य अचाक्ली बढेको बढ्यै छ । अझ खाद्य पदार्थको त कुरै नगरे भो । त्यसको मूल्य आकाशै छुने गरी वृद्धि भएकै छ । समय–समयमा भाउ बढ्ने क्रम पनि रोकिएको छैन । एउटै परिवारलाई पाल्न पनि मानिसलाई धौ–धौ पर्छ । व्यक्तिलाई परिवारका सदस्यहरूको मुखमा दुई छाक माड जुटाउनै कडा संघर्ष गर्नुपर्छ । तर, भारतस्थित पूर्वोत्तर राज्य मिजोरमका एक व्यक्तिको परिवारलाई महँगीले नछोएको हो कि जस्तो भान जो कोहीलाई पनि पर्न सक्छ । यसमा आश्चर्य नमान्नुस् । अनुशासित परिवार र कर्म गर्ने हातहरू सक्रिय भए यो संसारमा महँगीसँग जुध्न सकिने रै’छ । यसको पछिल्लो उदाहरण बनेका छन् ७२ वर्षीय डेज जिओना । उनको परिवारका सदस्य एउटा, दुइटा, तीन वटा हैन, १ सय ८१ जनाको छ । जिओनाले ३९ श्रीमती, ९४ सन्तान, १४ बुहारी र ३३ नातिनातिनासहित जम्बो परिवारलाई पाल्छन् ।
उनको परिवार एसियाकै सबैभन्दा ठूलो भएको ‘डेली न्युज’ ले जनाएको छ । पेसाले सिकर्मी उनको बख्तबाङ गाउँमा चारतले पक्की घर छ । जसमा सयजति कोठामा आफ्ना परिवारका सबै सदस्यलाई अटाउन भ्याएका छन् । हाँसीखुसी र मिलीजुली बस्छन् । घरका अभिभावकले अह्राएको काम गर्छन् र बाँडीचुँडी खान्छन् । सुन्दा अपत्यारिलो लागे पनि यो सत्य हो । जिओना भन्छन्, ‘मेरो पहिलो विवाह १७ वर्ष उमेरमा भएको थियो ।’ जम्बो परिवारलाई मिलाएर राख्ने गरेको एक जिज्ञासामा उनले परिवारमा सेनाको जस्तै अनुशासन रहेकाले सम्भव भएको बताए । उनकी प्रथम श्रीमतीले सबैलाई काम अह्राउने गरेकी छिन् ।
जिओना थप्छन्, ‘म आफूलाई भाग्यशाली ठान्छु, मेरो परिवार विश्वकै सबैभन्दा ठूलो र आदर्श परिवार हो ।’ उनको परिवारबारे अर्को रोचक प्रसंग पनि अनलाइनहरूले उल्लेख गरेका छन् । त्यो हो, निर्वाचनमा सबैले एउटै उम्मेदवारलाई मतदान गर्नु । नेपालमा हाल निर्वाचनको वातावरण छ । दलैपिच्छे परिवारका सदस्यहरू विभाजित छन् । तर, उनको परिवारमा यो फिटिक्कै छैन । यो सबैका लागि मननयोग्य कुरो भइहाल्यो । जिओना भन्छन्, ‘मेरो परिवारका सबै सदस्यले हालसम्म हालसम्म एउटै व्यक्तिलाई मत दिने गर्छन् ।’ त्यसैले निर्वाचनको बेला उनको परिवारको महत्त्व झनै बढ्ने गरेको छ । यसले एकताको सन्देश पनि दिएको छ ।
प्रकाशित : वैशाख २६, २०७४ २०:४५
वीरमा नि:शुल्क मृगौला प्रत्यारोपण सेवा सुरु
वैशाख २६, २०७४ फातिमा बानु
काठमाडौं — वीर अस्पतालले नि:शुल्क मृगौला प्रत्यारोपण सेवा सुरु गरेको छ । सरकारको पूर्वघोषित निर्णय अनुसार अस्पतालले नि:शुल्क प्रत्यारोपण सेवा सुरु गरिएको अस्पतालका निर्देशक डा. भूपेन्त बस्नेतले बताए ।सिन्धुपाल्चोककी रश्मिला श्रेष्ठलाई उनकै दिदी लक्ष्मी श्रेष्ठले मृगौला दिएपछि अस्पतालमा नि:शुल्क मृगौला प्रत्यारोपण आरम्भ भएको डा. बस्नेतले बताए ।
वीर अस्पतालले नि:शुल्क मृगौला प्रत्यारोपण सेवा सुरु गरेको छ । सरकारको पूर्वघोषित निर्णय अनुसार अस्पतालले नि:शुल्क प्रत्यारोपण सेवा सुरु गरिएको अस्पतालका निर्देशक डा. भूपेन्त बस्नेतले बताए ।
सिन्धुपाल्चोककी रश्मिला श्रेष्ठलाई उनकै दिदी लक्ष्मी श्रेष्ठले मृगौला दिएपछि अस्पतालमा नि:शुल्क मृगौला प्रत्यारोपण आरम्भ भएको डा. बस्नेतले बताए ।
मृगौला प्रत्यारोपणसम्बन्धी निर्देशिका – २०७४ अनुसार नै अस्पतालले नि:शुल्क कार्यक्रम सुरु गरेको निर्देशक बस्नेतले जानकारी दिए । निर्देशिकामा एउटा बिरामीको मृगौला प्रत्यारोपण गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पताललाई ४ लाख रुपियाँ र बिरामीलाई डेढ लाख रुपैयाँ दिने भनिएको छ ।
बिरामीले शल्यक्रियाअघि ५० हजार रुपियाँ र प्रत्यारोपणपछि एक वर्षसम्मको औषधिका लागि एक लाख रुपैयाँ रकम पाउनेछन् । अस्पतालले नि:शुल्क मृगौला प्रत्यारोपणका लागि ३ सदस्यीय समिति गठन गरेको अस्पतालले जनाएको छ ।